Diego Costa Oo Shaaca Ka Qaaday Sababta Dhabta Ah Ee Uusan Griezmann Uga Tegi Karin Atletico Madrid %
Maamulka sare ee kooxda kubada cagta Atletico Madrid, ayaa waxay rakeynayaa in Antoine Griezmann, uu go’aan sado lasii joogida kooxda ee sanado kale, waxaa sidaas oo kale ka dalbaday in uusan bixin xidiga reer Spain ee Diego Costa.
Costa, ayaa wuxuu kus heegay sababta in Griezmann, uu isaga ugu baaqay inuu dib ugu soo laabto Spain, uuna kasoo dhaqaajiyo Chelsea, islamarkaana hada uusan isaga kaligiis ka tegi doonin, maadaama wada shaqeyn doonta ay hadalee bilow tahay.
“Waxaan aaminsanahay inuu sii joogi doon halkaan,” ayuu Costa ka sheegay isagoo fadhiya shirka jaraa’id, maalintii shalay oo Talaado ahayd.
“Hada ka hor, waa uu isoo wacay wuxuuna ii sheegay inaan yimaado Atletico, marka hadda aniga kaligey ma igaaga tagayo halkaan.
“Isaga waa uu ka war-qabaa inuu uyahay kooxda ciyaaryahan muhiim ah, walina waa uu nala joogaa, waxaana rajeynayaa inuu nala sii joogo.
“Waxaan ku farax-sanahay inuu nala sii joogo, inkastoo qof walba uu sameyn karo wax badan oo wanaagsan hadana aniga ahaan, waxa ugu fiican ayaa ah inuu isaga nala joogo,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Diego Costa.
Atletico MadridDiego CostaGriezmann